Ka iibso kaniiniyada STD khadka tooska ah: Ku soo iibso ZIthromax Adiga oo aan dhakhtar qorin Inta U Yar Ilaa $ 4
Tirada dadka adduunku si xawli ah ayey u kordheysaa, dabeecadaha dadku ka qabaan galmada ayaa si xorriyad leh u hela. Iyadoo tan la sheegayo, faafida cudurada galmada lagu kala qaado (STD) waxay noqon kartaa mid aan la xakamayn karin markay dadku iskood wax uga baranin nooca cudurada. Dhimashooyin badan ayaa sababay cudurrada STD ee la daaweyn karo sababtoo ah macluumaad la'aan. Waxaa si weyn laguugula talinayaa in dadku aysan dooran xulafada galmada aan kala sooca lahayn ama aysan isticmaalin talaabooyin ka hortag ah sida cinjirka galmada
Cudurada galmada lagu kala qaado (STD), oo sidoo kale loo yaqaan cudurada galmada lagu kala qaado (STIs) waa infekshano iyo cuduro ay gudbiyaan wakiilo yar yar oo faafa sida fangaska, bakteeriyada, virus-ka iyo dulin-wadayaasha waqtiga galmada. Noolahaan yaryar waxaa badanaa laga helaa inta badan qaybaha jirka sida afka, cunaha iyo xubnaha taranka.
Xuubka xubinta taranka ee guska, siilka iyo afku waa meelaha ugu badan ee la isugu gudbiyo ee STIs. Tani waxay galmada ka dhigeysaa waxyaabaha ugu badan ee lagu kala qaado cudurka sababa bakteeriyada in kastoo kiisaska go'doonku ay ku dhacaan xiriirada caadiga ah sida taabashada, isku duubista iyo dhunkashada.
Hoos waxaa ku yaal liiska cudurada galmada lagu kala qaado oo guud oo leh sharaxaad u dhiganta sababaha, astaamaha iyo daaweynta.
Chancroid waxaa sababa bakteeriyada loo yaqaan Haemophilus ducreyi. STD-kan ayaa aad ugu badan wadamada saboolka ah sababo la xiriira faafitaanka galmada ganacsiga oo aad u baahay. Baadhitaanno caafimaad ayaa lagu sheegay in halista ragga aan la gudin ay saddex jibaar ka weyn tahay ragga la gudo. Ka dib markii bakteeriyadu ka soo if baxdo hal maalin illaa laba toddobaad, buro yar ayaa u muuqata oo keenta boog. Boogtu waxay noqon kartaa mid aad u xanuun badan, waxay leedahay soohdin aan caadi ahayn oo way dhiig bixi kartaa marka la xoqo. Chancroid waxaa lagu daaweyn karaa Azythromicin, Oral Erythromycin ama Ceftriaxone.
Jabtada waa mid ka mid ah cudurrada ugu badan ee adduunka lagu kala qaado galmada. Waxaa sababa bakteeriyada Neisseria gonorrheae. Infekshanku wuxuu kordhin karaa halista cudurka laga baqo ee AIDS-ka sababo la xiriira daciifinta dusha sare ee xuubka. Bakteeriyada waxay soo baxdaa 2 ilaa 14 maalmood. Calaamadaha lagu garto ragga waxaa ka mid ah kaadi xanuun iyo dheecaan ka soo baxa malawabka in kastoo mararka qaarkood, aysan jirin wax calaamado ah oo ragga ka muuqda. Astaamaha haweenka waxaa ka mid ah dheecaanka siilka, dysuria ama kaadida oo ku adkaata, caadada iyo wareegga wareegga dhiig baxa iyo dhiig baxa inta lagu guda jiro ama galmada kadib. Maroojisyo, dhiig bax u dhexeeya caadada caadada, qandho iyo matag ayaa ah astaamo horumarsan oo dumarka ku dhaca. Tilmaamahan ayaa horseedi kara horumarinta cudurka miskaha (PID).
herpes waxay leedahay laba nooc oo infekshan ah iyadoo kuxiran labada jeermis ee herpes Simplex (HSV). Nooca HSV-1 ayaa sababa infekshanka orofacial. Infekshankan waxaa lagu muujiyaa finanka xumadda ee hargabka daran ee badanaa ku dhaca bushimaha laakiin waxaa laga heli karaa wejiga, sanka, dhegaha iyo cunaha. Tan waxaa mararka qaar lagu qaldi karaa nabarro kansar ah. Nooca HSV-2 waa wakiilka sababa herpes-ka xubnaha taranka. Cudurka xubinta taranka waxaa lagu gartaa nabarro iyo nabarro ku dhaca aagga xubnaha taranka. Ilmaha ku jira caloosha gudaheeda wuxuu ku jiraa halis sare inuu qaado fayraskan dilaaga ah.
Chlamydia waa cudur si fudud loo bogsan karo oo lagu qaadi karo galmo siilka, afka ama dabada ah oo lala sameeyo qof qaba cudurka. Waxay u dhowdahay mid ka mid ah STDs-ka Mareykanka. Cudurka waxaa sababa bakteeriyada Chlamydia trachomatis. Haweenka, cudurkani ma muujin karo wax calaamado ah oo ka dhigaya inuu sumcad ku yeesho faafin aamusan. Calaamadaha lagu garto dumarka qaarkood waxaa ka mid ah dheecaanada siilka ee layaabka leh, xanuun inta lagu guda jiro galmada, qandho, calool xanuun iyo xanuun kaadi leh ama kaadi joogta ah. Ragga, astaamaha waxaa ka mid noqon kara qandho, kaadi gubasho ama kaadi aad u xanuun badan, dheecaan aan caadi ahayn oo faleebo ah, iyo xiniinyaha oo barara. Tetracycline, Amoxicillin, Erythromycin, Ciprofloxacin, Azithromycin iyo Doxycycline waa antibiyootiko caan ah oo si hufan u daweyn kara cudurkan.
Human Papillomavirus waxay sababi karaan koriimo aan caadi aheyn oo indhaha ah iyo kansarrada xubnaha taranka. Waxaa jira inka badan 50 nooc oo fayraskan midkasta oo sababa infekshano kaladuwan. Tusaale ahaan, culeyska 6 wuxuu keenaa burooyinka xubnaha taranka, culeyska 2 wuxuu keenaa burooyinka gacanta iyo culeyska 13 wuxuu keenaa dhaawacyo afka ah. Waa macquul in noocyada 16 iyo 18 ay yihiin sababaha kansarka in kastoo noocyo kale oo badan ay sababaan cudur maqaar dhif ah oo u horseeda kansarro.
Waraabow Ma yahay cudur si fudud la isugu gudbin karo oo sababay bakteeriyada loo yaqaan 'spirochete Treponema pallidum'. Cudurka astaamaha hore waa sameynta nabaro loo yaqaan chancre oo dheecaankiisu aad u faafo. Maaddaama cudurku galayo heerka labaad qiyaastii lix toddobaad, buurbuur waxay ka muuqdaan afka iyo nabarrada xubnaha taranka. Qandho iyo madax xanuun waa la dareemi karaa qanjidhada qanjidhada waa weynaanayaan. Taas ka dib, cudurku wuxuu galayaa marxalad qarsoodi ah halkaas oo astaamaha dibedda ay u muuqdaan inay baaba'ayaan laakiin caabuqyo ayaa ku dhaca xubnaha gudaha. Marka marxaladda jaamacadeed ay dhacday buro la yiraahdo gummas oo ka soo baxa xubnaha gudaha, maqaarka iyo xuubka xabka. Dhimashadu inbadan ayaa raacda gaar ahaan marka wadnuhu durba si xun u waxyeeleeyo.
hepatitis waa infakshan fayras ah oo waxyeeleeya beerka. In kasta oo aan daawo cad la soo bandhigin, haddana waxaa jira durbaba talaallo loogu talagalay Cagaarshowga. Waxaa jira shan nooc oo Cagaarshow ah: Cagaarshowga A, Cagaarshowga B, Cagaarshowga C, Cagaarshowga D iyo Cagaarshowga E.
Trichomoniasis waxaa sababa hal unug oo unugyo ah oo loo yaqaan 'Trichomonas vaginalis'. Infekshanku wuxuu saameeyaa 7.4 milyan oo Mareykan ah sannad kasta. Wuxuu ku dhacaa mareenka xubinta taranka haweenka, kaadi mareenka ragga iyo siilka dumarka. Waa cudur la daaweyn karo.
Cilladda difaaca jirka ee la helay (AIDS) waa midka ugu halista badan dhamaan cudurada galmada lagu kala qaado mana lahan daawo wali. Waxaa sababa fayraska difaaca jirka ee dadka (HIV), AIDS wuxuu dilay kumanaan dad ah iyadoon loo eegin da ', jinsi iyo jihada. Nidaamka difaaca jirka ayaa ah bartilmaameedka koowaad ee fayraska si markaa marka wakiilada difaaca jirka ee dabiiciga ahi ay daciifaan, noolaha waxyeelada leh sida bakteeriyada iyo fayrasku waxay weerar fursad ah ku qaadaan xubnaha waaweyn ee jirka. Tani waxay keentaa cuduro badan oo jirka ku dhaca oo qofka u sababi kara inuu si aad ah u xanuunsado ilaa uu ka dhinto.